रुकुम र जाजरकोट जोड्ने पुलमा ठेकेदारको चरम लापरबाही, ६ बर्षमा १ प्रतिशत काम पनि भएन, ठेकेदार बेपत्ता | Sagarmatha TVSagarmatha TV रुकुम र जाजरकोट जोड्ने पुलमा ठेकेदारको चरम लापरबाही, ६ बर्षमा १ प्रतिशत काम पनि भएन, ठेकेदार बेपत्ता | Sagarmatha TV
रुकुम र जाजरकोट जोड्ने पुलमा ठेकेदारको चरम लापरबाही, ६ बर्षमा १ प्रतिशत काम पनि भएन, ठेकेदार बेपत्ता
बद्री पन्त । जाजरकोट । ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण पश्चिम रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण अलपत्र परेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्र्तगतको उक्त पुल निर्माण शुरु भएको ६ बर्ष वितेको छ । तर पुलको १ प्रतिशत पनि काम भएको छैन । ३ बर्ष भित्रमा निर्माण पुरा हुने यो पुल ६ बर्ष वितिसक्ता पनि काम पुरा भएकोछैन ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना अन्र्तगतको चौरजहारी–कुदु स्थित भेरी नदी पुल निर्माणमा भएको ढिलाईले रुकुम र जाजरकोट सडक सञ्जाल जोडिनबाट बन्चित हुन पुगेको छ । पुल निर्माणमा भएको ढिलाईले आयोजनाको रुकुम जाजरकोट सडक खण्ड काम गर्न बाधा पुगेको छ । निर्माण कामको जिममेवारी लिएको निर्माण ब्यवशायीको चरम लापरबाहीका कारण पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । दुवै जिल्लाका स्थानीय आवतजावत लागि झोलुङ्गे पुलको भरमा छन् । भने व्यापार व्यवसायमा समेत असर परेको छ ।
समयमा पुल निर्माण नहुँदा लोकमार्गको स्तरोन्नोति गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुगेको छ । त्यस्तै पुल निर्माण अलपत्र पर्दा चौरजहारीमा नयाँ शहर निर्माण आयोजनाको काम समेत प्रभावित बनेको छ । २०६९ सालमा पुलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । । १३ करोड ४७ लाख लागतको उक्त पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको वाईपी कन्ट्रक्सन प्रा.ली. ललितपुरले ३ बर्ष भित्रै पुल निर्माणको काम पुरा गरिसक्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षेर गरिएको भएतापनि हालसम्म पुलको टावरको जग खन्ने कामपनि पुरा हुन नसकेको भन्दै जाजरकोटबासी आक्रोशित भएका छन् । ठेकेदार राजुप्रसाद श्रेष्ठ वेपत्ता छन् ।
३ बर्षको समयमा पुल निर्माण गरिसक्ने भनेर कामको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले ६ बर्ष वितिसक्दा पनि पुलको जग खन्ने काम पनि पुरा नगरेको भेरी नगरपालिका १३ का वडा अध्यक्ष गोपालबहादुर बटालाले बताए । मुलुकको ब्यबस्था फेरीएको छ तर, काम गर्ने अबस्था फेरिएन उनले भने । ठेकेदारले पुलको १ प्रतिशत पनि काम नगरेको बटालाले बताए । दुई तिहाईको सरकार भएर पनि ६ बर्षमा पुल नबनाउने ठेकेदारलाई कुनै पनि कारवाही गर्न नसकेको बताए ।
भेरी पुल नबन्दासम्म रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु, मटेला समुन्द्र पारीका दुई भिन्न देश जस्तै भएका छन । छिटोछरीतो पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित पक्षलाई पटक पटक अनुरोध गरेपनि ब्यवशायीले अटेरी गर्दै आएको स्थानीय इमाश्वर देवकोटाले बताए । निर्माण शुरु भएको ३ बर्षमा कार्य सम्पन्न हुने पुल ६ बर्ष वित्दा पनि जगै निर्माण नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कडा कारवाहि गर्नु पर्ने देवकोटाको भनाई छ । सडक विभागको डिजाईन अनुसार कार्यस्थलमा कार्य गर्ने वातावरण नहुँदा पुल निर्माणमा ढिलाई भएको व्यवशायीले जनाएको छ । पुरानो डिजाईन अनुसार पिलर तथा स्टीलपार्ट भएको पुल निर्माण गर्नु पर्ने थियो ।
तर नदीको वाहव् डाईभर्सन गर्न नसकिने भएपछि पिलर निर्माण रद्ध गरेर लठ्ठावाला सस्पेन्सन व्रिज बनाउने नयाँ डिजाईन बनेको हो । सडक विभागकै कारण पुल निर्माण ढिलाई भएको ठेकेदारको भनाइ छ । व्यवशायीले निर्धारित समयमा पुल निर्माण गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने बताईएको छ । २ पटक म्याद थप्दा समेत ठेकेदारले पुल निर्माणको काम नगरेको लोकमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । यस पुलको रुकुम साईटमा पिल्लर र यङकरिङ्गको फाउण्डेसन निर्माण गरेर जग पुरिसकेको भएता पनि जाजरकोट साईटमा पिल्लर र यङकरिङ्गको राम्रोसंग फाउण्डेसन पनि पुरा हुन नसकेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम पुरा भएको छ ।
जाजरकोट खण्डमै पिजको काम अगाडी बढिसकेको भएतापनि पुल नबन्दासम्म उक्त मध्यपहाडी लोकमार्ग कुनै उपयोगमा नआउने देखिएको छ । निर्धारीत समयमा काम नसक्ने निर्माण ब्यबसायीलाई कडा कारबाही गर्ने भनेर गृहमन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लावाट समयमा काम नसक्ने निर्माण ब्यबसायीको नाम, लिष्ट माग गरेको भएता पनि भेरी पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको वाईपी कन्ट्रक्सन प्रा.ली. ललितपुरलाई कारबाही भने हुन सकेको छैन ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म वाईपी कन्ट्रक्सन प्रा.लीका ठेकेदार राजुप्रसाद श्रेष्ठसंग फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन । भेरी पुल निर्माण परियोजनाका डाईरेक्टर उद्ब खत्रीले भने, लगानी गर्न नसक्दा निर्माण कम्पनीले तोकेको समयमा काम गर्न नसकेको बताएका छन । उक्त मध्यपहाडी लोकमार्गको मुख्य कार्यालय दैलेखले पनि व्यवास्था गरेको छ । यस आयोजना सडकको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा भएर स्तरोन्तीको कार्य अगाडि बढेको छ ।
भेरी नदीमा पुल निर्माण थालिएको छ वर्ष बितिसक्दासमेत अधुरै छ । जसले गर्दा रुकुम–जाजरकोट सीधा यातायात सम्बन्ध विस्तार हुन सकेको छैन । यसबाट दुवै जिल्लाको विकास निर्माणमा ठुलो बाधा पुर्याएको बताईएको छ ।